Amasu ama-4 abalulekile webhizinisi lakho le-Multi-Location Online | Martech Zone
Akusona isibalo esimangazayo, kepha kusamangaza impela - ngaphezu kwengxenye yakho konke okuthengiswayo okusesitolo kuthonywe yidijithali ngonyaka owedlule ku-infographic yabo yakamuva ekukhangiseni ibhizinisi lakho lezindawo eziningi online.
I-MDG icwaninge yathola izindlela ezine ezimqoka zokumaketha ezidijithali lapho wonke amabhizinisi anezindawo eziningi okufanele awasebenzise afaka phakathi usesho, ipulatifomu, okuqukethwe, nezitayela zedivayisi.
Sesha: Lungiselela i- "Open Now" nendawo - Abathengi bayasuka ekufuneni izinto ezenzelwe ikusasa ezifana amahora wesitolo kumatemu asheshayo anjenge vula manje. Eqinisweni, ukusesha okubandakanya ukuvula manje sekuphindwe kathathu eminyakeni emibili edlule Ngenxa yokuthuthuka kokuphequlula okubona indawo, abathengi futhi abafaki imininingwane yendawo kusesho lwabo. Lokho kusho ukuthi izinkampani zidinga ukuqinisekisa ukuthi imininingwane yazo yendawo isesikhathini kusayithi labo, amaphrofayili wezenhlalo, kanye nanoma yiziphi izinkomba.
Amapulatifomu: Gxila Kumakhasi Wakho we-Google Bhizinisi Lami nakuFacebook - I-Google kanye ne-Facebook bahlukanisa isikhala sohlelo lokusebenza lewebhu nolweselula, ngakho-ke ukuqinisekisa ukuthi amabhizinisi akho amelwe ngokunembile nangokuphelele kuwo womabili amapulatifomu kubalulekile empumelelweni yakho yokumaketha kwidijithali. Izinto zifaka ikheli, amahora ebhizinisi, inombolo yocingo, izithombe, izindatshana, izixhumanisi, ukuhlanganiswa, ukukhangisa, izilinganiso, izibuyekezo, imininingwane yendawo, kanye nokubizelwa esenzweni ukuze uhlanganyele nebhizinisi.
Okuqukethwe: Linga ngezicucu ezinde kakhulu nezimfushane kakhulu - Izindatshana namavidiyo angenza ngokuhlukile phakathi kokuma, ukwabelana, nokuzibandakanya, ngakho-ke hlola ukuthi yini eqhuba inhlanganisela enhle yebhizinisi lakho. Vary ubude, ngisho nocezu olufanayo, ngokususelwa kungxenyekazi.
Amadivayisi: Lungela Ikusasa Ledijithali Elisuselwa Ezwi - okunye kokuthuthuka okukhulu okungakafiki ku-steam egcwele okwamanje kepha okubaluleke kakhulu ukusetshenziswa kwezindawo zokuxhumana zezwi ukuxhumana nezingxenyekazi / amadivayisi edijithali. I-Amazon isivele ithengise amadivayisi we-Echo angaphezu kuka-10 wezigidi ze-Alexa futhi kulinganiselwa ukuthi kuzoba nezikhulumi ezihlakaniphile ezingama-21.4 e-United States ngo-2020. okuqukethwe okuhlangabezana nalokho okulindelwe kuzoba kubaluleke kakhulu kumabhizinisi.
Ngokwenza ngasikhathi sinye ukusebenzisa isu lakho lokusesha lendawo / ukushesha, imali yokutshala imali ekuthuthukiseni amakhasi akho e-Google Bhizinisi Lami ne-Facebook, ukuzama ubude obuhlukile bokuqukethwe, nokulungiselela ukuxhumana okuqhutshwa ngezwi, uzothuthukisa imizamo yakho yokumaketha. Ukukhangisa kwe-MDG
Nayi i-infographic ephelele evela ku-MDG Advertising, Ama-4 ama-Essential Digital Marketing Tactics wamabhizinisi amaningi.
Tags: amazon echoubude bokuqukethweamakhasi e-facebookgoogle ibhizinisi lamiinfographicseo sendawomdg ukukhangisaindawo eningiamabhizinisi amaningivula manjeseoubude bevidiyoukusesha ngezwiigama lokubala